ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको नाफा बढ्यो ,अन्य सूचक कस्तो? – Insurance Khabar
ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको नाफा बढ्यो ,अन्य सूचक कस्तो?
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १२:५७
काठमाडौं । ओरियन्ट इन्स्योरेन्सले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासको अवधिसम्ममा ३७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा १२२ प्रतिशतले बढेको छ ।
कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा ५९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको थियो । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको थियो । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ६ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै,कम्पनीले समिक्षा अवधिमा १४ हजार ९ सय ९२ वटा बीमालेख जारी गरेर ८० करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन सकलन गर्न सफल भएको छ ।चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले कुल १ हजार १ सय ६७ वटा बीमा दाबी वापत ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।